Sidee loo soo celiyaa isku xirnaanta shabakadda ee Mac 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Apple Macs iyo MacBooks runtii waa kumbiyuutarro qurux badan oo la fiiriyo oo la dhigo xafiiska ama miiskeena, laakiin sidoo kale, quruxdooda iyo kaamil ahaantooda, weli waa kombuyuutarro, sidaa darteed way joojin karaan shaqada waxayna yeelan karaan dhibaatooyin xagga isku xirnaanta ah. fudud ama ka yar fudud in la xaliyo.
Haddii aan ku ogaanno Mac-geenna in xiriirku internet-ka yimaado oo socdo, bogagga shabakaddu si sax ah uma furmaan ama barnaamijyada adeegsada adeegyada internetka (sida VoIP ama codsiyada shirarka fiidiyowga) uma shaqeeyaan sidii la rabay, waxaad gaartey hagaha ku habboon: halkan dhab ahaantii waxaan ka heli doonaa dhammaan hababka, fudud oo dhakhso leh si aad u dalbato xitaa isticmaale laylis ah, si soo celinta xiriirinta shabakadda ee Macsi aad ugu laaban karto soo dejinta iyo xawaareha xawaaraha ee aad aragtay ka hor inta aysan dhibaatadu dhicin oo aad dib ugu laabato shaqada ama aad wax ku barato Mac-gaaga sida aan waxba u dhicin.
AKHRISO: Xalka dhibaatooyinka router iyo isku xirnaanta wifi
Sidee loo soo celiyaa isku xirnaanta Mac
Si loo soo celiyo isku xirka Mac-ga waxaan ku tusi doonaa labadiinaba qalabka baaritaanka ee ku jira nidaamka qalliinka macOS sida isla markaaba diyaar ugu ah in la isticmaalo iyo tabaha khabiirrada qaarkood si xiriirka Internet-ka uu mar kale u shaqeeyo sidii oo aan bilownay Mac-ga markii ugu horreysay.
Isticmaal cilad-baadhis wireless ah
Haddii dhibaatada isku xirnaanta ay timaaddo markaan ku xiran nahay shabakadda Wi-Fi, waxaan ku tijaabin karnaa aaladda Cillad-la’aanta cudurka ay bixiso shirkadda Apple lafteeda. Si aad u isticmaasho, hubi inaad ku xiran tahay shabakad Wi-Fi ah, riix oo hayso Xulasho (Alt), aan tagno menu-ka Wi-Fi ee ku yaal dhinaca midigta sare oo riix Fur cilad-sheegis wireless.
Waxaan galnaa aqoonsiyada koontada maareeyaha, ka dib waxaan sugeynaa in qalabka uu fuliyo jeegaggiisa Iyada oo ku xidhan natiijada, daaqad ayaa laga yaabaa in lagu furo iyadoo talo soo jeedinno la raacayo, laakiin daaqad kooban oo ka mid ah hawlgallada ay sameeyeen Mac si loo soo celiyo isku xidhka ayaa sidoo kale soo muuqan kara. Haddii dhibaatadu tahay mid isdaba-joog ah (xarriiqda ayaa timaadda oo socota), daaqad la mid ah kuwa soo socda ayaa sidoo kale soo bixi kara
Xaaladdan oo kale waxaa lagugula talinayaa in aad dhaqaajiso codka Xakamee xiriirkaaga Wi-Fi, inaad ka tagto hawsha hubinta isku xirka Mac-da, si ay u soo faragaliso haddii ay dhibaatooyin dhacaan. Furitaanka maqaalka Tag qoraalka oo kooban taas bedelkeeda, waxaan heli doonaa macluumaad kooban oo ku saabsan shabakadeena iyo talooyin waxtar leh oo ku saabsan dalabyada.
DNS waa adeeg muhiim u ah isku xirka internetka iyo, xitaa haddii qadka si buuxda u shaqeeyo oo modemkuna ku xiran yahay, waa ku filan tahay in adeegani uu muujiyo cillad (tusaale ahaan, cilad darida DNS ee hawlwadeenka) si looga fogaado isku xirnaanta marwalba. degel
Si aad u hubiso haddii dhibaatadu la xiriirto DNS, fur menu Wifi O Ethernet dhanka midigta sare, dhagsii sheyga Furan doorbidka shabakada, aan tagno iskuxirka firfircoon waqtigaan, guji Horusocodka uguna dambeyn shaashadda DNS.
Waxaan asal ahaan arki doonnaa cinwaanka IP-ga ee modem-ka ama router-keena, laakiin waxaan ku dari karnaa server cusub oo DNS ah adoo riixaya + astaanta hoose iyo teeb garaynta 8.8.8.8 (Google DNS, had iyo jeer kor u kacaya). Kadibna waan tirtirnaa adeegii hore ee DNS-ka oo riix xagga hoose Okay, si aad u isticmaasho kaliya serverka aan dooranay. Si aan waxbadan uga ogaano waxaan sidoo kale aqrin karnaa hageheena Sida loo beddelo DNS.
Tirtir goobaha shabakadaha iyo faylasha doorbidka
Haddii Cilad-baadhista Wireless iyo isbeddelka DNS-ka aysan xallin dhibaatada isku-xirka, waxaan isku dayi karnaa inaan tirtirno qaabeynta shabakadda ee ku jirta nidaamka, si aan ugu celcelino marin u helka shabakadda Wi-Fi ee illaa hadda la adeegsado. Si aad u sii wadato, dami xiriiriyaha Wi-Fi ee hadda firfircoon (ka bilow midigta midig Wi-Fi menu), ka fur Finder-ka baarka Dock ee xagga hoose, u gudub menu O, waan fureynaa Tag gal waxaana qoreynaa wadada soo socota.
/ Maktabada / Xulashada / Dejinta Nidaamka
Marka faylkani furmo, tirtiro ama u dhaqaajiso faylasha soo socda Mac recycle bin:
Waxaan tirtirnaa dhammaan faylasha, ka dibna dib u bilownaa Mac si isbeddelada ay u dhaqan galaan. Marka dib loo furo, waxaan isku dayeynaa inaan mar kale ku xirno shabakadda Wi-Fi ee dambiga leh, si aan u hubino haddii xiriirku si habsami leh u shaqeynayo.
Talooyin kale oo waxtar leh
Haddii aynaan tan xallin, waxaan u baahanahay inaan sii baarinno, maadaama ay jiri karto arrin aan si toos ah u saameynaynin Mac laakiin ku lug leh modem / router ama nooca isku xirnaanta aan u adeegsanno inaan ku xirno. Si aad isugu daydo inaad saxdo, waxaan sidoo kale isku daynay talooyinka lagu siiyay liistada soo socota:
Aynu dib u bilowno modemka- Tani waa mid ka mid ah talooyinka ugu fudud, laakiin xaqiiqdii waxay xallin kartaa dhibaatada, gaar ahaan haddii aaladaha kale ee ku xiran isla shabakadda ay sidoo kale la mid yihiin dhibaatooyin la mid ah Mac. Dib u bilaabiddu waxay kuu oggolaaneysaa inaad si dhakhso leh u soo celiso isku xirnaanta adigoon wax kale samayn.
Waxaan u adeegsannaa isku xirnaanta 5 GHz Wi-Fi- Dhammaan Mac-yada casriga ahi waxay leeyihiin isku-xir laba-geesood waana la doorbidaa in marwalba la isticmaalo kooxda 5 GHz, oo aan u-nuglayn fara-gelinta shabakadaha u dhow oo si dhakhso leh ugu degdega xaalad kasta. Si aan wax badan uga barano waxaan aqrin karnaa hageheena Farqiga u dhexeeya 2,4 GHz iyo 5 GHz shabakadaha Wi-Fi; kee fiican?
Waxaan u adeegsanaa isku xirka Ethernet: hab kale oo deg deg ah oo lagu fahmo haddii dhibaatadu tahay in isku xirka Wi-Fi uu ku lug leeyahay adeegsiga fiilo aad u dheer oo Ethernet ah, si aad ugu xirmi karto Mac-ka modemka xitaa qolal kala duwan. Haddii xiriirku shaqeynayo, dhibaatadu waxay ku jirtaa moduleka Wi-Fi ee Mac ama habka Wi-Fi ee modemka, sida sidoo kale lagu arkay hagaha. Xalka dhibaatooyinka router iyo isku xirnaanta wifi.
Waxaan tirtiraynaa Range Extender ama Powerline: Haddii aan ku xirno Mac-da iyada oo loo marayo Wi-Fi Extender ama Powerline, waxaan isku dayeynaa inaan iyaga baabi'inno oo aan si toos ah ugu xirno shabakadda modem ama aan u isticmaalno fiilada Ethernet. Qalabkani aad ayuu faa'iido u leeyahay, laakiin waqti ka dib ayuu kululayn karaa oo wuu xannibi karaa khadkaaga internetka illaa inta laga saarayo oo daqiiqado yar kadib la isugu xidhayo.
Codsashada dhammaan tilmaamaha lagu soo bandhigay tilmaamahan waxaan xallin karnaa inta badan dhibaatooyinka isku xirnaanta Mac annaga, iyada oo aan loo yeerin farsamo yaqaan kombuyuutar ama aan daarin qalab kale oo aan ku waalano kumanaan dhib badan oo ay adag tahay in la raaco tilmaamaha. Shabakad
Haddii, in kasta oo ay ku jirto talobixinta tilmaamuhu, isku xidhka shabakadu aanu ka shaqaynaynin Mac-da, ma jiraan wax hadhay oo la qabto laakiin bilaw habsami u soo kabashada ka dib markii aad ku kaydiso faylasha shakhsiga ah a Wadada USB dibedda; si loo sii wado dib u soo celinta kaliya akhriso hagayaasheena Sida loo hagaajiyo Mac, loo hagaajiyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka macOS mi 9 siyaabood oo aad dib ugu bilaabi karto Mac-kaaga una soo celin lahayd bilow fiican.
Waxaan ku xirnahay Wi-Fi laakiin ma daalacanayo: maxaa la sameeyaa
Sida loo xaqiijiyo caymiska 5G
Xalka haddii Android Wi-Fi uusan ku xirnaan doonin shabakad ama internet
Sida loo beddelo 'DNS TV St dabka'
Sida loo habeeyo xarunta Vodafone
Sida loo keeno internetka internetka dabaqa iyo geeska guriga oo dhan
La wadaag xiriiriyaha fiiqan adiga oo aan adeegsan router (router)
Abuur shabakad VPN si aad ugu cayaarto tooska ah LAN-ka
Furaha sirta ah iyo galitaanka dhamaan wadooyinka
Isku habeynta dekeda ku wareejinta routerka si fudud si ay ugu furaan dekedaha isgaarsiinta
Xiriir desktop fog ah ka iPhone / iPad kumbuyuutarkaaga